Iindaba - Itshintsha njani iklatshi esencwadini? Kuya kufuneka sinikele ingqalelo kwezi zinto zintathu
Ipleyiti yokuhambisa yokuhambisa ibambe yeyezinto ezisetyenziswayo. Ngokusetyenziswa kweemoto, ipleyiti yokubamba iya kunxiba kancinci. Xa ukunxiba kufikelela kwinqanaba elithile, kufuneka kutshintshwe. Sazi njani ukuba isitya sokubamba kufuneka sitshintshwe? Ngokwamava adlulileyo, ndicinga ukuba ezi meko zilandelayo zibonisa ukuba ipleyiti yokubamba kufuneka itshintshwe.
1. I-clutch pedal inzima, kwaye imvakalelo yokwahlukana ayicacanga
Ukuba ufumanisa ukuba i-clutch pedal inzima kakhulu kunangaphambili, kwaye unokuqinisekisa ukuba akukho ngxaki ngokudluliselwa ukusuka kwi-clutch pedal ukuya kwi-clutch, kunokwenzeka ukuba i-clutch plate yincinci.
Ngenxa yokuba ipleyiti yokubamba isangweji phakathi kwephepha elinamavili kunye nepleyiti yoxinzelelo, xa ipleyiti yokubamba ityebile kakhulu, ipleyiti yokukhuhlana yepleyiti yoxinzelelo ixhaswe yiclutch yokubamba, kunye nesipleyiti sokugaya kwelinye icala liya kuqiniswa ngaphakathi. Ngeli xesha, kulula kakhulu ukuqhuba ipleyiti yokusila ngokunyathela iklatshi. Ngapha koko, i-pedal ilula kwaye inzima, kwaye kukho uxhathiso oluncinci ngexesha lokwahlukana, ngelixa i-pedal ilula ngakumbi ngaphambi kokwahlukana nasemva kokwahlukana.
Xa ipleyiti yokubamba iba nciphise, ipleyiti yokuxubana kwipleyiti yoxinzelelo iya kungena ngaphakathi, ibangele ukuba isitya sokugaya sijike ngaphandle. Ngale ndlela, xa unyathela iklatshi, intambo yovalo kufuneka ityhalelwe ukuhamba umgama ongaphezulu, kwaye amandla entwasahlobo yovalo akwanelanga ukuphakamisa ipleyiti yoxinzelelo kwindawo yokuqala yokufuduka. Kuphela xa ipleyiti yokusila icinezelwe ukuya kuthi ga kwinqanaba apho ipleyiti yoxinzelelo inokwahlulwa. Ke ngeli xesha, i-clutch pedal iya kuba nzima kakhulu, kwaye imvakalelo yokuzahlula okomzuzwana ayinangqondo, iphantse ingabonakali.
Ukuba le nto yenzekayo, emva kokuphelisa ezinye izizathu, inokugwetywa ukuba ipleyiti yokubamba inciphile, kodwa akufuneki itshintshwe ngeli xesha, kuba icekecekile, kwaye ayichaphazeli umsebenzi oqhelekileyo. Ngaphandle kokuba uvakalelwe kukuba i-pedal inzima kakhulu kwaye awufuni kuyinyathela, ungacinga ukuyitshintsha, kungenjalo ayizukuba yingxaki kwelinye ixesha.
2. Iiklatshi ziyayiyeka inyathelo elincinci
Oko kukuthi, indawo edibeneyo yokubamba iphezulu. Ngenxa yokuba i-clutch plate isandwich phakathi kwe-flywheel kunye neplate yoxinzelelo, amandla entwasahlobo epleyiti yoxinzelelo yokusila ipleyiti yokutyhala ipleyiti yoxinzelelo lweplate ukucofa isitya sokubamba ngokuqinileyo kwiflowwheel. Ijiye ipleyiti bamba, kokukhona deformation koxinzelelo ipleyiti besila ipleyiti intwasahlobo, kwaye mkhulu amandla nokubotshwa na. I-thinner iplati ye-clutch yile, encinci ukuguqulwa kwe-spring plate yokugaya kwaye kuncinci ukunyanzeliswa kwamandla. Ke xa ipleyiti yokubamba icekeceke ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, amandla okubotshwa kwepleyiti yoxinzelelo kuyo yoluliwe. Ukuba ucinezela i-clutch pedal kancinci, iklatshi iya kwahluka
Ke xa ufumanisa ukuba i-clutch pedal phantse ikhululeke ukuya esiphelweni xa uqala, imoto ayizukuhamba, okanye i-clutch iyakwahlula xa unyathela i-clutch pedal kancinci, ikakhulu ngenxa yokunxiba okugqithisileyo kweklatshi isitya. Ngeli xesha, ipleyiti yokubamba kufuneka ithathelwe indawo ngokukhawuleza, kuba ngeli xesha, ipleyiti yokubamba sele ibhityile. Ukuba iyaqhubeka nokuba ngumhlaba, ii-rivets ezizinzileyo zeplatin clutch ziya kukhutshelwa ngaphandle kwaye ipleyiti yoxinzelelo iya konakala.
3. Ukubamba iklatshi
Andifuni ukwazisa oku. Ipleyiti yokubamba icekeceke kakhulu. Ipleyiti yoxinzelelo kunye ne-flywheel ayinakugqithisa amandla kuyo ngesiqhelo. Musa ukuthandabuza ngeli xesha, litshintshe ngokukhawuleza. Kuba ayizukulimaza kuphela ipleyiti yoxinzelelo lwakho, kodwa ikwasisongela ngokubalulekileyo ukhuseleko lokuqhuba. Khawufane ucinge ukuba ukulungele ukugqitha endleleni, unyawo lweoyile enzima lwehlile, iklatshi yatyibilika, isantya senjini sishaya umlo, kwaye isantya asizange sihambe, iyoyikeka loo nto.
Ukusebenza kokuqala kweslip clutch akucaci, kwaye akunakuze kuve xa uqhuba ngegiya ephantsi. Inokuviwa kuphela xa uqhuba ngesantya esiphezulu kwaye unyathela isantya. Ngenxa yokuba i-clutch ayifuni ukuhambisa i-torque eninzi xa uqhuba ngegiya ephantsi, kwaye umthwalo we-clutch mkhulu xa uqhuba ngegiya ephezulu, ngoko ke kulula ukutyibilika.